Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Todd Cantwell Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara “Antzọ”. Akụkọ Todd Cantwell Childhood Akụkọ ya na akụkọ Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ịrị elu nke Todd Cantwell. Ebe E Si Nweta Foto: edp24 na TheFA.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ atụmanya na-akpali akpali na etiti. Agbanyeghị, naanị ole na ole na-atụle Todd Cantwell's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Midfielder Todd Owen Cantwell mụrụ na 27th ụbọchị nke February 1998 n'obodo East Dereham na England. Amụrụ na ndị nne na nna hụrụ football n'anya gụnyere nna aha ya bụ Steve na nne nwere ike ikpebi ka Cantwell kpughee mgbe ebipụtara akụkọ banyere bio a.
Todd Cantwell mụrụ nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: Edp24 na PxHere.
N'ikwu eziokwu na ọdịdị ya, Cantwell bụ nwa amaala Britain nke agbụrụ ọcha na-enweghị obere mmalite. A zụlitere ya n'ebe ọmụmụ ya n'obodo East Dereham, England na nwanne ya nwoke Jordan na nwanne ya nwanyị Amber.
A zụlitere Todd Cantwell na East Dereham na England. Ebe E Si Nweta Foto: Edp24 na Pinterest
O tolitere na Dereham, Cantwell bụ nwa nwere nku anya nke nwere ntutu dị nkọ nke nwere mmasị ile ihe omume telivishọn dị ka “Tracy Beaker” ma soro ndị ọgbọ ya na-egwu bọl. Ọ nwere nrọ nke ịghọ ọkachamara n'ọgba egwuregwu n'oge ọ dị obere ma bụrụ onye na-akwado ya na ndị nne na nna "Arsenal fanning" ndị zụlitere ọchịchọ ya site na afọ.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Nkụzi na ịrụ ọrụ
Cantwell nwere agụmakwụkwọ mbụ ya na ụlọ akwụkwọ King Park dị na Dereham, England tupu ya abanye Northwest High - ya na Dereham, England - maka agụmakwụkwọ sekọndrị ya.
Foto nke Todd Cantwell dị ka nwata akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ King Park na East Dereham, England. Ebe E Si Nweta Foto: Edp24.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ ọrụ mmụta abụọ ahụ, Cantwell bụ onye na-agba bọọlụ na-arụsi ọrụ ike ọkachasị na Northgate High ebe a kọwara ntinye aka ya na ihe ịga nke ọma nke ụlọ akwụkwọ ahụ dị ka "nke dị n'elu na karịa".
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ndụ Ndụ Mmalite
Nke a, a na - ede ede? ọ bụghị n'ezie. Mechie ka anyị na-alaghachi azụ na Cantwell itinye aka na bọl tupu ọ rọọ nrọ ịga Northgate High School. Know maara na Cantwell gụrụ maka usoro ndị ntorobịa nke Dereham Town?
Ee, o doro anya na mere ma bụrụ ihe ịtụnanya mgbe o meriri n'iko niile dị n'usoro onyinye U8 na U9 nke Dereham Town. Enweghị ekele maka ụdị mmeri Cantwell, e webatara iwu ọhụrụ nke mere onye ọkpụkpọ ọ bụla tozuru oke inweta otu iko. Ọ bụ na ọ bụghị ike nke itule?
Todd Cantwell nwere ọtụtụ mmeri o meriri na usoro ndị ntorobịa nke Dereham Town. Ebe E Si Nweta Foto: edp24.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ụzọ E Si Mara Aha
Tupu iwu nchịkwa Dereham Town nke Cantwell nwere ike ijide Cantwell, onye ahụ 10 dị afọ ahụ abanyelarị na Norwich Academy ebe meteoric ọ na-atụ anya gafere n'ọdịdị ọsọ ọsọ dịka ọ tụrụ anya. Na agbanyeghị, Cantwell nwetara ọkpụkpọ oku mbụ ya maka ọrụ mba ụwa na ndị otu U17 nke England mgbe ọ dị afọ 16 na 2014.
Akpọrọ Todd Cantwell ka ọ bụrụ ndị otu egwuregwu U17 nke England mgbe ọ dị afọ 16. Ebe E Si Nweta Foto: TheFA.
Ka ọ na-erule afọ 2017, A kpọrọ Cantwell ugboro abụọ ka ọ bụrụ onye edochi maka egwuregwu Norwich mana ọ nweghị mgbe ọ ga-apụta maka ndị otu egwuregwu. Onye ọkpọ ahụ na-achọsi ike bụ izu ole na ole site na emume ncheta ọmụmụ 20th ya mgbe o mechara emee ọfụma na - emeghị nke mbụ otu egwuregwu Norwich City n'oge egwuregwu FA Cup na Chelsea na Stamford Bridge na Jenụwarị 2018. Mgbe nke ahụ gasịrị, a gbazitere ya n'ụlọ ọgbakọ Dutch nke abụọ Fortuna Sittard maka oge ndị ọzọ.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Na-ewu Onwe Gị Akụkọ
Ọ bụ n'oge ụlọ ọgbakọ nke Fortuna Sittard nke abụọ ka Cantwell gosipụtara na ọ bụghị abụ ọfụma jọgburu onwe ya site n'ịgba akara ugboro abụọ na inye enyemaka atọ na ntanetị 10 iji nyere klọb ahụ aka inweta nkwado na Eredivisie na njedebe nke 2017-18 mkpọsa.
Todd Cantwell nyeere Fortuna Sittard aka inweta nkwalite na Eredivisie. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter.
N'ịlaghachi na Norwich City, Cantell nyere ikike mmalite ya na klọb ahụ n'oge egwuregwu EFL Cup na Stevenage na August 2018. Ọ gara n’ihu igosipụta 24 na asọmpi niile n’oge 2018 / 2-9 dị ka obodo Norwich meriri Betlọ Egwuregwu Sky Bet.
Ngwa ngwa ngwa dị ka ụbọchị nke Cantwell na-eguzobe onwe ya dị ka onye na-eme egwuregwu na-enweghị atụ na Premier League ebe dike ya kachasị ọhụrụ na-agbago ihe mgbaru ọsọ megide Chelsea na 25 nke August 2019. Site na mgbaru ọsọ, Cantwell - agbachiri na akwa 14 jersey - ghọrọ onye ọkpụkpọ Norfolk mbụ amụrụ mgbaru ọsọ Premier League maka Norwich City n'ime afọ 14. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Todd Cantwell gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ Premier League ya na August 2019 n'oge Norwich City meriri 2-3 na Chelsea. Ebe E Si Nweta Foto: Pinkun.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ezigbo Ndụ Mmekọrịta
Roses na-acha ọbara ọbara, violet na-acha anụnụ anụnụ, Cantwell nwere ike iso onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya na-eme mkpapụ, mana anaghị ahapụ ya. N'ihi ya, enweghị ike ịkpọ ya nke ọma n'otu oge ahụ, amabeghị onye ọkpọ egwuregwu ahụ ịlụ di na nwunye n'oge edere.
Na agbanyeghị, anyị ji n'aka na ọ lekwasịrị anya na ime ka ọnọdụ ya sie ike na Norwich obodo ịmalite iri na otu, karịsịa mgbe ị bịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụụ nke nwere ike ịhụ ka ọ nọrọ na klọb ahụ ruo 2022. O nwere ike oge tupu Cantwell achọta onwe ya nwanyị ma ọ bụ wag ma nwee ike nwee nwa nwoke na nwa nwanyị site na njikọ ahụ.
Todd Cantwell nwere ike ghara ịbụ otu na oge edere. Ebe E Si Nweta Foto: LB na Youtube.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ezi Ezinụlọ
Ezinụlọ dị mkpa na Cantwell na ihe ọ bụla ọzọ na-abịa nke abụọ maka onye na-agbachitere onye nwere ndụ ezinụlọ dị ịtụnanya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị otu ezinụlọ Cantwell.
Banyere nna Todd Cantwell: Achọpụtala nna Cantwell dị ka Steve Cantwell. Nna na-akwadosi ike na onye na-agba bọọlụ jikọtara aka na ịgba bọl na agụmakwụkwọ izizi n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị tupu ụlọ akwụkwọ Norwich amalite. Steve nwere obi ụtọ banyere onye Cantwell aghọọla ma soro ya mgbe ụfọdụ maka ọrụ ebere.
Banyere nne Todd Cantwell: Ọ bụ ezie na a maghị ihe dị nta banyere mama Cantwell, O nyeere aka bulie onye na-akụ ọkpọ ma na-aga ụfọdụ n'ime egwuregwu ya. Nkwado nne ya na Cantwell na-abawanye ụba site na ikike ya ikwu okwu banyere ya n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ. O nwere ike oge na-adịghị anya tupu Cantwell setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ maka nne nwa site na igosi ya onwe ya na mgbasa ozi mgbasa ozi.
A zụlitere Todd Cantwell site na ndị nne na nna na-akwado ndị na-amaghị ihe dị nta. Ebe E Si Nweta Foto: Transfekt na ClipArtStation.
Banyere ụmụnne Todd Cantwell: Cantwell nwere ụmụnne abụọ amata, ha gụnyere nwanne ya nwoke Jordan na nwanne nwanyị Amber. Dị ka Cantwell, Jordan nwere mmasị n'ịgba bọl ma kọwaa onwe ya dị ka talent nke atọ nke ezinụlọ na ezinụlọ. Ka ọ dị ugbu a, a maghị ọtụtụ ihe banyere nwanne nwanyị Canwell Amber bụ onye kwenyere na ọ bụ naanị nwa nwanyị nke ezinụlọ.
Banyere ndị ikwu Todd Cantwell: N'ịgakwuru ndị ezinụlọ nke Cantwell, ọ nwere nwanne nwoke a na-akpọ Kevin Owen, onye Fakenham ebe a na-amaghị ọtụtụ ihe banyere nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya. Na mgbakwunye, ndị nna nna Cantwell na nne mụrụ amabeghị ma ụmụ nwanne nwanyị nke ọkpọ ahụ amabeghị ihe omume ndị pụtara ìhè nke ndụ ya ruo taa.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ezigbo Ndụ Onye
Omume Cantwell nwere omume Pisces Zodiac nke gụnyere nghọta, ihe okike na ntụpọ. Omume dị iche iche na-enye ya mmụọ dị mma nke ga - eme ka ndị enyi na ndị na - ege ya hụ ya n'anya.
N’igwu ala n’ime ihe omimi nke agwa Cantwell, o ghaghi ekpughe nkọwa banyere ndu ya na nke onwe ya. N'ihi ya, amabeghị ihe banyere ọrụ ntụrụndụ na ọdịmma ya karịrị ikiri ihe nkiri, igwu egwuregwu vidio, ime njem na iwepụta oge na okike.
Ga njem bụ otu n’ime ntụrụndụ Todd Cantwell. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Eziokwu Nzuzo
Na-ekwu maka etu Cantwell si na-eme ma na-emefu ego ya, ọ na-ewulite ezigbo ego, site na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ nke mbụ. Ndị ọzọ na - enye aka na akụnụba ya na - enweta ego sitere na ntinye aka na ntinye aka onwe onye.
Agbanyeghị, Cantwell na-ebi ndụ ndụ na-echekwa echekwa ka ọ na-atụ anya ịghọ nnukwu onye na-akpata ego afọ. N'ihi nke a, enwere ike iwe obere oge tupu ndị na-akwado ya hụrụ ya ka ọ na-anya ụgbọala ndị mara mma ma nwee ụlọ ndị dị oke ọnụ dị ka ndị egwuregwu veteran. Agbanyeghị, ọ bụ nnukwu na ịga ebe ntụrụndụ mba ụwa maka izu ike n'oge ezumike.
Todd Cantwell (n'isi isi aka ekpe) na-ekpori ezumike ya na njem dị oke ọnụ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Akụkọ hoodmụaka Todd Cantwell tinyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Eziokwu efu
Kedu otu ị Todd Cantell siri karịa ihe edere banyere ya na ihe ọmụmụ nke a? Anyị na-ewetara mmadụ ole ma ole ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere onye ọkpọ egwuregwu.
IKPE: Cantwell abụghị onye ukwu na okpukpereja dịka ọ naghị enye echiche nke ịbụ onye okpukpe n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ ma ọ bụ n'ememe mgbaru ọsọ n'oge ede. Kaosiladị, nsogbu ahụ dị ya mma ịbụ Onye Kraịst.
TATOO: O nweghi ahu aru n'oge a na-ede ya, o nwere ike nweta egbugbu na-eche banyere penchant ya na-abawanye elu maka ngosiputa okike. Ruo mgbe ahụ, Cantwell bụ naanị otu esi kee ya.
Todd Cantwell enweghị egbugbu ahụ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
SM SMụ sịga na ị DRụ mmanya: Onye egwu bọọlụ na-egwuri egwu n'ime otu egwuregwu dị egwu nke ndị na-anaghị a smokeụ sịga ma na-a drinkụ n'oge ede. Ihe kpatara ịzọ ije n'ụzọ dị mma dị otú a bụ ijide n'aka na anụ ahụ ga-anọ n'ọnọdụ zuru oke iji rụọ ọrụ achọrọ bọl ụkwụ elu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị nke Todd Cantwell gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.